ဤရွေ့ကား 10 ခုနှစ်တွင်အမေဇုံပေါ်တွင်အရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်း 2016 ခဲ့ကြသည် | Gadget သတင်း
ဤရွေ့ကား 10 ခုနှစ်တွင်အမေဇုံပေါ်တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2016 ခဲ့ကြသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၆ ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်မထားခဲ့ကြပါ။ ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကမနှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုစပြီးလေ့လာနေတာပါ၊ အမေဇုံ ၎င်းတို့အနက်နောက်ဆုံးပေါ်နာရီများ၌ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်းများစာရင်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် ၂၀၁၇ ၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်များနှင့်လများအတွင်းအရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။
အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကဒီစာရင်းထဲမှာ Samsung နဲ့ Apple ရဲ့ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားမှုတစ်ခုမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှ ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပြီးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန် ၁၀ ခုဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားများဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် သငျသညျအဘယျသို့သိလိုလျှင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အမေဇုံတွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု၊ သင်နှင့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားမိလျှင်ဤစာရင်းကသင့်ကိုများစွာကူညီပေးနိုင်သည်။
1 Motorola Moto, G 2015
2 Huawei က P8 Lite ကို
3 Motorola က Moto G4 ပို
4 Doogee X5 မိသားစု
5 Samsung ရဲ့ Galaxy J5
6 ကျန်တဲ့ ၂၁၀၁၆ မှာ Amazon မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံး
Motorola Moto, G 2015
အမေဇုံတွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် Motorola Moto, G 2015 ၎င်းသည်၎င်း၏မျှတသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ၎င်း၏စတော့ရှယ်ယာဗားရှင်းအတွက်ထင်ရှားသော်လည်း၎င်းထက်ပိုမိုသည် စျေးနှုန်းကတော့ယူရို ၁၄၀ ၀ န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် နှင့်မည်သည့်အိတ်ကပ်များအတွက်ချိန်ညှိထက်ပိုမိုသံသယမရှိဘဲ။
အကယ်စင်စစ်သင်တို့တွင်များစွာသောဒီပထမ ဦး ဆုံးရာထူး၌တွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား iPhone ကို7သို့မဟုတ် Samsung ရဲ့ Galaxy S7, ဒါပေမယ့်ဒီဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနှစ်ခုစလုံးဟာအမေဇုန်မှာအရောင်းရဆုံးရောင်းသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဆက်ပြီးမရှာနိုင်အောင်သူတို့ကဒီစာရင်းထဲမှာတောင်မှပေါ်မလာဘူးလို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
သင်သည် Motorola Moto G 2015 ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ဒါကအချိန်ကြာခဲ့ပါပြီ Huawei က P8 Lite ကို စျေးကွက်၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်းယနေ့အချိန်အထိပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းနှင့်အညီဟန်ချက်ညီဆုံးသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei P9 Lite ကိုဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော်လည်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှဤစမတ်ဖုန်းသည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင်သာမကဘဲအလယ်အလတ်တန်းစားစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ ဆိပ်ကမ်း။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် Huawei P8 Lite ၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင်5လား။ resolution ကို 1280 × 720 နှင့်အတူ
Kirin 620 64-bit 1,2 GHz ပရိုဆက်ဆာ
16GB ROM ကို 128GB အထိ micro SD ဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည်
4G LTE ဆက်သွယ်မှု
EMUI 5.0 ပါသော Android 3.1
ရွှေ၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်နှင့်အနက်ရောင်များကိုရရှိနိုင်သည်
သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် Huawei P8 Lite ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ၁၆၅ ကနေ ၁၇၀ ကြားရနိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ငွေအနည်းငယ်သာသုံးစွဲလိုပါကယနေ့သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။
သင်သည် Huawei P8 Lite ကို Amazon မှ ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Motorola က Moto G4 ပို
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း Amazon တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ၃ ယောက်တွင် Motorola ထုတ်ကုန်နှစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်၎င်းတို့၏ဆိပ်ကမ်းများ၏လက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်သူတို့၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူအောင်မြင်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ အရှေ့ Moto 4G Plus ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းဖြင့်ရရှိထားသည့်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အချို့ကိုအထက်တွင်တွေ့ရမည့်ဗွီဒီယိုတွင်သင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုအဓိကပြတယ် Moto G4 Plus ၏ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ;
အရွယ်အစား - ၁၅၃ x ၇၆.၆ x ၇.၉-၉.၈ မီလီမီတာ
Full HD resolution နှင့်အတူ ၅.၅ လက်မအရွယ် screen သည် 5,5 x 1.920 pixels
617 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သော Qualcomm Snapdragon 1.5 ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာ
2 သို့မဟုတ်3RAM ကို
16 သို့မဟုတ် 32 GB သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုကို microSD ကဒ်မှ 128 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
16 MPX နောက်ဘက်ကင်မရာ၊f/ 2.0၊ (လေဆာရောင်ခြည်သုံး auto-focus)
3000 mAh ဘက္ထရီ TurboCharging (၆ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီး ၁၅ မိနစ်အားသွင်းပါ)
အန်းဒရွိုက် OS ကို 6.0
ဈေးနှုန်းမှာ ၂၃၉ ယူရိုဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုးဆိုင်အမြောက်အများတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အထူးလျှော့စျေးများဖြင့်တွေ့နိုင်ပြီးယူရို ၂၀၀ ကျော်မျှသာ terminal ကိုရနိုင်သည်။
သင် Motorola Moto 4G Plus ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ
Doogee X5 မိသားစု
ဤစာရင်းတွင်တွေ့နိုင်သည် Doogee terminal, အထူးသဖြင့် X5 မိသားစု ကျနော်တို့ကသူက၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမဆိုထူးခြားတဲ့မဟုတ်ပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာယူရို 70 အထိမရောက်ရှိသော၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်သင်တို့ကိုသတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်မိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုသာလိုချင်လျှင်နှင့်အခြားအရာအနည်းငယ်သာရှိပါကဤ Doogee စမတ်ဖုန်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရုပ်ဆိုးသောအရာကိုတွေ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါ၊ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ဒီ terminal ကဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကြိုးစားသည်နှင့်၎င်းသည်သင်အံ့သြသွားပြီးသင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
Doogee X5 Family ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ
မကြာသေးမီအချိန်က Samsung ၏အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှာ Galaxy J မိသားစုကိုဖွဲ့စည်းထားသောမတူညီသောမိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုဈေးကွက်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ က galaxy J5သုံးစွဲသူအများစုအတွက်အရွယ်အစားအရစုံလင်သောဒီဇိုင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောကင်မရာနှင့် ၅.၂ လက်မဖန်သားပြင်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအလယ်အလတ်တန်းစား၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုပေးစွမ်းသည်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း Amazon တွင်အရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်းများစာရင်းတွင်ခိုးဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုနေရာများစွာတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအရောင်ပေါ် မူတည်၍ ယူရို ၁၉၀ ခန့်ရှိသည်.
သင်သည် Samsung Galaxy J5 ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ
ကျန်တဲ့ ၂၁၀၁၆ မှာ Amazon မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံး
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စျေးပေါသောဆိပ်ကမ်းများဖြစ်ခြင်းနှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြသောစမတ်ဖုန်း ၅ လုံးကိုတွေ့ရသည်။ အရောင်းကိန်းဂဏန်းအလိုက်စီပါ LG က Nexus ကို 5Xအများပြည်သူသတိမပြုမိသည့် Nexus တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် BQ Aquaris X5 y Aquaris M5 BQ, အစဉ်အမြဲအံ့သြစရာ Huawei G Play Mini နှင့် BQ Aquaris A4.5 ဒီစာရင်းကိုပိတ်ဖို့
သင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အမေဇုံမှရောင်းခဲ့သောစမတ်ဖုန်းများထဲမှပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသလား။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ဤရွေ့ကား 10 ခုနှစ်တွင်အမေဇုံပေါ်တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း 2016 ခဲ့ကြသည်
Juan Manuel Martinez Varela ဟုသူကပြောသည်
အမေဇုံကို ဦး တည်စေသည့် link သည်သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သည်။ သင်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သည်၊ သင်အလုပ်အတွက်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်ပြီးသုံးစွဲသူသည်ပိုမိုကုန်ကျမည်မဟုတ်သော်လည်းရက်ပေါင်း ၉၀ Cookie ရှိရန်တောင်းထဲထည့်ပြီးမြို့ ၃ မြို့ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Juan Manuel Martinez Varela အားပြန်ကြားပါ
တရုတ်ဆိပ်ကမ်းများ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်မှာငါစိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ကတိတော်တော်များများကိုကတိပေးပြီးနောက်သူတို့ရောင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး Doogee သည်ငါပြောသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤအမှတ်တံဆိပ်မှ terminal ကိုဘယ်တော့မှဝယ်တော့မည်မဟုတ်။ အခုငါ၌ Blackview R6 ရှိပြီးယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များကိုပြည့်မီနေသည်
ဂူဂဲလ်သည် Google Play တွင်ဒေါင်းလုပ်သန်း ၅၀၀ ကျော်သည်